Fahatongavan’ny papa François: nametraka lamina sy fepetra ny Emmo/Nat | NewsMada
Zava-dehibe eto amin’ny firenena. Vory lanona tetsy amin’ny Toby Ratsimandrava, omaly ireo olobe eo anivon’ny fitandroana ny filaminana sy ny avy amin’ny fitaterana ary koa ny eo anivon’ny fiangonana katolika. Maherin’ny enina hetsy ireo mpino ho avy ka niompana amin’ny fepetra horaisina momba izany ny fivoriana.
Nambaran’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisona tamin’izany fa tsy maintsy raisina ny fepetra satria marobe ireo vahoaka sy ny kristianina ho avy amin’izany fitsidihana ataon’ny papa François eto amintsika izany. Maherin’ny 600 000 izy ireo ka ny 500 000 avy eto amin’ny diosezin’Antananarivo raha avy any amin’ny diosezy hafa kosa ny ambiny, amin’ireo nisoratra anarana. Hisy ny fandaminana tsy maintsy atao, araka ny nambarany. Anisan’izany ny eny amin’ny seranam-piaramanidina. “Olona voatokana sy voafaritra ihany ireo mitsena eny Ivato. Tahaka izany koa amin’ireo lalana izorany ka tokony handray ny fandaminana ny rehetra mba hizotra araka ny tokony ho izy ny fahatongavan’izany raimandreny izany”, hoy izy.
Maherin’ny 7 500 ireo mpitandro filaminana
Tahaka izany koa ireo toerana rehetra hotsidihin’ny papa François : Andohalo, Amparibe, Toby Akamasoa sy Mahatazana… “Tsy maintsy ho hentitra izahay mba hipetrahan’ny filaminana. Efa voatokana avokoa ny olona afaka mandeha amin’ireny faritra ireny”, hoy ihany izy. Natsidiny koa fa efa misy ny toerana natokana ho an’ny fiara ary ny tokony handehanana an-tongotra mba tsy hampitohana ny fifamoivoizana. Hanetsika mpitandro filaminana 7 500 ny fitondrana amin’izany. Nanterin’ny prefet-n’Antananarivo, ny Jly Ravelonarivo Angelo kosa, fa mbola hojerena manokana ny fiahiana ny fandriampahalemana andavanandro tsy hiseho ny fanararaotana ataon’ny jiolahy. “Hojerena amin’ny Emmo/Nat izany ary tsy misy tokony hifanilika andraikitra”, hoy izy.
Fiaraha-miasa amin’ny Amerikanina
Ankoatra izany, efa misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny zandary sy ny Amerikanina amin’ny fitandroana ny filaminana amin’ny fotoana ahatongavan’ny papa François. “Hisy ny fifandraisana tsy tapaka amin’ny masoivoho eo amin’ny fampitana vaovao. Mifanila rahateo ny toerana hivantanan’ny delegasiona tarihin’ny Ray Masina sy ny toeram-ponenan’ireo diplaomaty amerikanina sasany”, hoy ny Jly Ravalomanana, afakomaly.
Ho an’ny antokon-draharahan’ny fitaterana (ATT) indray, hojerena manokana ny momba ireo fiara sy ny fitaterana. Ny toerana iaingana sy ny fahatongavana, avy amin’ireo diosezy miisa 21. Tokony hampiasa fiara hatrany amin’ny 4 000 mahery nefa tsy tokony hampiato ny fitaterana andavanandro any amin’ny faritra izany.
Tsiahivina fa hisy hatrany ny fivoriana isan-kerinandro ataon’ireo tompon’andraikitra rehetra ireo, amin’izao herinandro vitsy hahatongavan’ny avy any Vatikana izao.